China Eco Friendly Canvas Grocery Tote Bag kwemveliso kunye Factory | Ngqo
Iingxowa ze-Canvas zingahlulwa zibe ziindidi ezintathu ngokwezixhobo, ipholiyesta yomqhaphu, umqhaphu ococekileyo, kunye nepolyester emsulwa; Iingxowa ze-canvas zahlulwe zangumlenze omnye, igxalaba eliphindwe kabini, kunye neebhegi ngokwendlela yangasemva. Ingxowa ye-Canvas yingxowa eyaziwayo kule minyaka idlulileyo kuba yomelele kwaye inovakalelo emva kokuyibona. Yindlela yangoku yefashoni. Kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo ngokwamaqela abantu. Kukho ukunyuka kwentaba, ukuhamba, kunye neendlela zokuzonwabisa.
Imibala yeebhegi zelaphu nazo zahluke kakhulu. Kukho umbala omnye okanye ukudityaniswa kwemibala. Ziingxowa ezihambelana ngokukhululekileyo. Ngezinto ezongezelelekileyo zoyilo lweebhegi zelaphu, ibhegi ye-canvas yenze imfashini. Ingxowa ye-Canvas yifashoni entsha yangoku yabantu. Iingxowa ze-Canvas zokutya zixhaphakile kwaye zinokuthelekisa nayiphi na impahla. Ingxowa yelaphu ye-Monotone yeyona nto ixhaphakileyo, nangona iluncedo kakhulu, kodwa ndiyakholelwa ukuba ngamanye amaxesha uyakruquka, emva koko unokukhetha ibhegi enemibala eqaqambileyo yokuthenga.
Ingxowa ye-canvas yomelele kwaye yomelele, ngokuhambelana nefashoni yabathandi bokuhamba. Isikhwama se-canvas senziwe nge-burlap canvas. Olona phawu lukhulu kukuba lomelele. Ubume bayo obuguquguqukayo buyathandwa ngabantu abaninzi, kwaye inokudibana nayo nayiphi na impahla. Uyilo olwahlukileyo lwesingxobo se-canvas, kunye nokuhonjiswa kwangaphandle kwangaphandle kunye nomgangatho wangaphakathi, kuye kwaba yimfashini yabantu abatsha.
Olona ncedo lukhulu lweengxowa zelaphu kukuba zomelele kwaye iipateni ezingxoweni ziyile. Iingxowa zelaphu kulula ukuzisebenzisa kwaye zijongeka zilungile kwaye ixabiso lincinci. Ngokubanzi, ungathenga enye ngaphezulu kweedola ezilishumi, kodwa ukuba uya kuthenga nakweyiphi na into eyaziwayo, kuyabiza kakhulu. Emva kwayo yonke loo nto, amagama egama labo axabisa imali eninzi. Ingxowa ikwaluhlobo lwebhegi enoqoqosho nefikelelekayo. Samkela uyilo lwakho, oko kuthetha ukuba unokuba neebhegi zakho zelaphu ngemali encinci. Nceda uqhagamshelane nathi!
Egqithileyo Ingxowa yokuthenga ye-Canvas
Okulandelayo: Ibhegi yeCotton Tote esebenza kwakhona
Ingxowa enamavili yokuThengisa ukutya kweTote